बजारमा किनमेल र कार्यालयमा कामको लागि जाँदा ख्याल गरौँ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असोज ७, २०७७ बुधबार १०:२६:५४ | डा. अनुप बास्तोला
काठमाण्डाै - सडक बजारमा चहलपहल बढे पनि कोरोनाको जोखिम कम भएको छैन । किनमेलको लागि बजारमा जाँदा होस् या कुनै कामको लागि कार्यालय, बैंक तथा अरु भीडभाड हुने ठाउँमा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने कुरालाई सधैं व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । बजार, पसल तथा कार्यालय सबै खुलिसकेकाले र भीडभाड हुने अवस्था आएकाले मास्क अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । मास्क लगाएर मात्रै हुँदैन, तरिका मिलाएर त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कुनै सतही भाग छोएपछि स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने वा साबुनपानीले हात धुनुपर्छ । अनावश्यक रुपमा भीडभाड हुने ठाउँमा जानु हुँदैन । सकेसम्म भीडभाडबाट बच्नुपर्छ । कुनै कामका लागि आफू गएको ठाउँमा भीडभाड भएमा पालो कुरेर भीडभाड कम भएपछि मात्र जानुपर्छ ।
084 corona - capsule 2020-09-23
दैनिक उपभोग्यका सामान छुँदैमा कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्ने भन्ने होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा तरकारीलगायतका सामान किनेपछि प्लाष्टिकको झोलालाई व्यवस्थित गर्ने र साबुनपानीले हात धुने कुरालाई भने निरन्तरता दिनुपर्छ ।
सम्बन्धित व्यवस्थापन पक्षले सार्वजनिक ठाउँमा हुन सक्ने हुलमुल व्यवस्थापन गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले पनि मुख्य रुपमा तीन वटा कुरालाई बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । ती भनेका भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेलाबेला स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र मास्कको नियमित प्रयोग गर्नु हो ।
म सङ्क्रमणको जोखिममा हुन सक्छु भन्ने कुराको मनन जतिबेला पनि गर्नुपर्छ । सावधानीका उपाय प्रत्येक दैनिकीमा अपनाउनु जरुरी हुन्छ । सकेसम्म भीडभाड नगर्ने, मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्न भुल्नु हुँदैन । कुनै ठाउँमा दूरी कायम नभएको भेटिएमा सम्झाउनुपर्छ । यसमा अझ यूवा पुस्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यस्तै राज्य संयन्त्र र अरु सम्बन्धित निकायले पनि सार्वजनिक ठाउँहरुमा हुने भीडभाड कम गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । काम गर्ने ठाउँबाट घर फर्किसकेपछि पनि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साबुनपानीले हात धुने कुरालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सके नुहाइधुवाइ गरेर बस्नु राम्रो हुन्छ । तर मुख्यरुपमा चाहिँ बाहिर वा कार्यालय लगायतका ठाउँमा नै जोगिनुपर्छ । जोखिम हुने ठाउँमा नै बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
कार्यालयमा दूरी कायम भएको छ कि छैन ? कोठामा राम्ररी हावा चलेको छ कि छैन ? सँगै काम गर्ने साथीबीच दूरी कायम भएको छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई ध्यान दिने गर्नुपर्छ । अनि घर फर्किसकेपछि पनि साबुनपानीले हात धुन, सरसफाइमा ध्यान दिन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न बिर्सनु हुँदैन ।
(डा. बास्तोलासँग कुराकानीमा आधारित)
अन्तिम अपडेट: असोज २८, २०७७
डा. बास्तोला शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।